Ubume - Chengdu Dacheng Energy eNtsha Techenology Co.
UChengdu Dacheng New Energy Technology Co Ltd uqokelele iqela leengcali kumacandelo eebhetri zokugcina, ulwazi lwe-elektroniki, ulawulo oluzenzekelayo, isoftware yekhompyuter, kunye nokusebenza kwebhetri ye-lithium yamandla kunye nendibano. Ingcali kuphando kunye nophuhliso, imveliso, ibandla kunye nokulungiswa, ukuthengisa kunye neenkonzo zobuchwephesha zokutshaja izixhobo kunye neebhetri ze-lithium.
Izixhobo zokutshaja izithuthi zombane zidibanisa itekhnoloji yamandla e-elektroniki, itekhnoloji ye-electrochemical kunye neetekhnoloji zenzekelayo ze-microcomputer ngesiseko sobuchwephesha bokutshaja kwezomkhosi. "Ukuma kwempompo okudibeneyo okukhawulezayo kunye nokutshaja iteknoloji", kusetyenziswa "ukubetha kwempazamo kunye nokudibanisa ukubetha okungafunekiyo okukhoyo", kunye "nokuhlawuliswa kunye nenkqubo yokufumana inkqubo ngokuzenzekelayo kunye nolawulo lwenkqubo" iphuhlisile kwaye yavelisa "izixhobo ezikhawulezayo zokutshaja ngaphakathi ngokukhawuleza", Ukugqobhoza okwenzeka ngaphakathi ngaphakathi Ukutshaja okungapheliyo okukhoyo kunye nokuchithwa kwendlela kungasombulula bhetele iingxaki zekhemikhali kunye nokwahlulahlula uxinzelelo, ukunyuka kweqondo lobushushu, igesi, njl njl. ngaphakathi ngaphakathi kwebhetri ngaphandle kokutshintsha ifomula yentsusa kunye nenkqubo yebhetri. Le ngxaki iphucula kakhulu ukusebenza kokutshaja, iyalinciphisa kakhulu ixesha lokufunda ngaphakathi, iphucula kakhulu imveliso kunye nokusebenza kwebhetri, inciphisa iindleko zokuvelisa, iphucula umgangatho webhetri, kwaye yandisa ubomi benkonzo yebhetri lutshintsho olukhulu olwenziwe imveliso ibhetri.
Amandla amatsha asebenzayo kwimodyuli yebhetri kunye nebandla lamkela iteknoloji ekhokelayo ukuqhuba uphuhliso oluzinzileyo, kwaye uzama ukuvula ixesha lebhetri ye-lithium ekrelekrele. Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwizantya ezinamavili amane kwizithuthi ezinamavili, izithuthuthu ezindala, iiRVs, iitrayikhi, izithuthi ezibuka indawo, izithuthi zabakhenkethi, iinqwelo zeGalufa, izithuthi ezikhubazekileyo, izithuthi ezinamavili amabini, iirobhothi ezikrelekrele, iUPS yokugcina amandla amandla okuhambisa, iselfowuni unikezelo lwamandla, izinto eziselwandle kunye nezinye iinkalo.
Zama ukwakha inkampani ekhokelayo yamandla amatsha kunye nethekhinoloji ejongene nehlabathi.
Iminyaka engama-23 yasemkhosini
Iiseti ezingama-50000 +
Umasifundisane wethu wokuvelisa imveliso ongenathuli
Iworkshop yokutshaja inyanzelisa ukwamkela izimvo zolawulo lwangoku kunye nemowudi yolawulo lwedatha enkulu, kwaye yamkela itekhnoloji yokusebenza ngokukuko kunye nezixhobo zemveliso ezenzekelayo. Ukuqaliswa kwemveliso yovavanyo oluzenzekelayo kunye neendlela zokuvelisa, kunye nokusetyenziswa kweendlela zokusebenza kweerobhothi kwimigca yemveliso ezenzekelayo kunciphise ukudinwa kwabasebenzi kunye nokuphucula umgangatho wemveliso.
Okwangoku, imveliso yayo yenyanga ziiseti zeetshaja ezingama-10,000-20000. Umgangatho bubomi be-Dacheng New Energy, kunye nokuqaqanjiswa komgangatho oqinileyo kunye nenkqubo yolawulo olungqongqo boyise ukuthembakala kwexesha elide kwabathengi. Umbono kunye nemigaqo "yobuNkokheli boMgangatho" isebenza kuyo yonke ishishini lophuhliso lwemveliso, abanikezeli, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa. Ngenxa yoko, uDacheng Xinneng wayilawula ngokungqongqo idatha yemveliso yangaphakathi nangaphandle ngazo zonke iindleko, ukuze idatha yemveliso irekhodwe kakuhle, kwaye uxanduva lwaluthwalwa ngumntu kunye neyunithi.
Indibano yebhetri yeLithium inendibano eqinileyo yezobuchwephesha kunye neqela lokuvavanya, kwaye ukukhula kwemveliso kunenkqubo epheleleyo yolawulo. Jonga ngokungqongqo yonke imiba yezinto ezingenayo, ulawulo lomgangatho kwi-Intanethi, uvavanyo lwentsebenzo yokhuseleko, uhlolo oluphumayo, njl., Ukuqinisekisa umgangatho weemveliso. Ngophuhliso olukhawulezileyo lweshishini elitsha lamandla, ngokuhambelana nomba "wamandla aluhlaza" kunye noxanduva lweshishini olusebenzayo, ukunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni kuluntu luphela sisicwangciso sophuhliso lwendibaniselwano, esizinikele ekukhuthazeni uphuhliso lwekhabhon amashishini, kunye nokwakha ukonga izixhobo, Ukwenza igalelo elifanelekileyo kuluntu oluhambelana nokusingqongileyo kunye nokuhambelana.